ခကျြ ကို သနျ့ဖို့လိုရဲ့လား … – Focus Myanmar
တဈကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေး လုပျကွတယျနျော။ ဒီလို တဈကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေး လုပျရတာက ခန်ဓာကိုယျမှာ အနံ့အသကျ ကငျးစငျဖို့ပါ။ တကိုယျရေ သနျ့ရငျြးရေးလုပျတဲ့အခါ ခေါငျးအစ ခွအေဆုံး သနျ့စငျမှုတှေ လုပျကွပမေယျ့ ဗိုကျအလယျတညျ့တညျ့မှာ ရှိနတေဲ့ ခကျြကို သနျ့ရှငျးရေး လုပျမလားဆိုတာကိုတော့ စဉျးစားကွပါတယျ။ အကွောငျးက ခကျြထဲက အညဈအကွေးတှကေို သနျ့စငျတဲ့အခါ ဗိုကျအောငျ့လိမျ့မယျဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။ ဒီတော့ ခကျြကို သနျ့စငျသငျ့ရဲ့လားဆိုတာကို ဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာ ဖတျကွညျ့လိုကျပါ။
ခကျြက ဘာကွောငျ့ နံရတာလဲ…………..
ခကျြက လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့နရောတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။ ခကျြထဲမှာ ပုံမှနျကတော့ ခြှေးတှေ၊ ဆဲလျသတှေေ နဲ့ အမှုနျတှေ ရှိနနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အနံ့ဆိုးထှကျနတောပါ။
ခကျြက အနံ့ထှကျရတဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးက သနျ့ရှငျးမှု အားနညျးလို့ပါ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နရောအနှံ့ကို နေ့စဉျ သနျ့ရှငျးရေး လုပျသလို ခကျြကိုလညျး ပုံမှနျ သနျ့စငျဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
အရပွေားပျေါမှာ ဘကျတီးရီးယားတှကေ ထရီလြံနဲ့ခြီပွီး ရှငျသနျနနေိုငျသလို သူတို့ကအခြိနျတိုငျးမှာ အလိုလိုပေါကျဖှား ဖွဈပျေါနကွေတာပါ။ တဈကိုယျရေ သနျ့ရှငျးရေးကို ပုံမှနျဂရုစိုကျနမေယျဆိုရငျ အန်တရာယျမရှိပမေယျ့ ခကျြလိုမြိုး လဝေငျလထှေကျ မကောငျးဘဲ အရပွေား အတှနျ့အခေါကျမြားတဲ့ နရောမြိုးမှာကြ ဘကျတီးရီးယားတှကေ ပေါကျဖှားရှငျသနျဖို့ လှယျကူပါတယျ။
ဘကျတီးရီးယားအရအေတှကျ နညျးတဲ့အခါ အနံ့ဆိုး ဖွဈပျေါတာမြိုး မရှိပမေယျ့ ဘကျတီးရီးယားတှ အရမျးမြားလာတဲ့အခါ ခကျြက အနံ့ဆိုးဖွဈပျေါလာပါတယျ။
ခကျြကို သနျ့စငျဖို့ လိုလား………….
ခကျြထဲမှာ ဘကျတီးရီးယားမြားစှာ ရှိနတောကွောငျ့ အနံ့ဆိုးထှကျတာဆိုတော့ ခကျြကိုလညျး အခွားခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှေ နညျးတူ သနျ့စငျဖို့ လိုပါမယျ။ လေ့လာမှုတှအေရတော့ ခကျြထဲမှာ ဘကျတီးရီးယား အမြိုးပေါငျး ၆၇ မြိုးလောကျ ရှငျသနျနနေိုငျတယျဆိုပါတယျ။
ခကျြကို ပုံမှနျ မသနျ့စငျဘူးဆိုရငျ ခကျြထဲမှာ အညဈအကွေးတှနေဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ရှငျသနျပေါကျဖှားနနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အကောငျးဆုံးက ခကျြကို တဈပတျ တဈကွိမျ သနျ့စငျတာပါ။
ခကျြကို ဘယျလို သနျ့စငျမလဲ……………
ခကျြကို သနျ့စငျတဲ့အခါ အဆငျ့ (၂) ဆငျ့ခှဲထားပါတယျ။ ဒါကတော့ ခကျြအတှငျးပိုငျးကို သနျ့စငျတာနဲ့ ခကျြအပွငျဘကျကို သနျ့စငျတာပါ။
ခကျြအတှငျးပိုငျးကို ဒီလို သနျ့စငျပါ
ခကျြအတှငျးပိုငျးကို သနျ့စငျတော့မယျဆိုရငျ ရမေခြိုးခငျမှာ
ဂှမျးစ သနျ့သနျ့လေးကို အရကျပွနျ ဆှတျပွီး ခကျြအတှငျးပိုငျးကို ခပျဖှဖှလေး သနျ့စငျပါ။ ဂှမျးစမှာ ပတောမြိုး၊ အရောငျပွောငျးသှားတာမြိုး ဖွဈမယျဆိုရငျ အသဈတဈခု ပွောငျးပါ။ဂှမျးစက သနျ့သှားပွီးဆိုရငျ နောကျထပျ ဂှမျးစအသဈကို ယူလို့ ရစှေတျပါ။ ခကျြကို သနျ့စငျပွီး ဂှမျးစအခွောကျလေးနဲ့ သနျ့ပေးပါ။ပွီးရငျ ရခြေိုးခလြိုကျပါ။ ရခြေိုးပွီးပွီဆိုရငျတော့ တဘကျစ အစှနျးလေးနဲ့ ခကျြကို သနျ့စငျပေးပါ။
ခန်ဓာကိုယျကို body lotion လိမျးတဲ့အခါ ခကျြထဲ မဝငျစဖေို့ ဂရုစိုကျပါ။ ခကျြအတှငျးသားက စိုစှတျမှု ရှိနမေယျဆိုရငျ ဘကျတီးရီးယားတှေ ပေါကျဖှားနိုငျပွီး အနံ့ဆိုးတှေ ဖွဈလာနိုငျတာကွောငျ့ပါ။
ခကျြအပွငျဘကျကို ဒီလို သနျ့စငျပါ
ခကျြအပွငျဘကျကို သနျ့စငျတာက ခကျြအတှငျးပိုငျးကို သနျ့စငျတာထကျ ပိုမို လှယျကူပါတယျ။ ရမေခြိုးခငျမှာ
ရစေိုအဝတျသနျ့သနျ့တဈခုနဲ့ ခကျြတဝိုကျကို ပှတျပါ။ ပွီးရငျ ဆပျပွာပှတျပါ။ပွီးရငျ ရလေောငျးခလြိုကျပါ။ရခြေိုးပွီးတဲ့အခါ သခြော ခွောကျအောငျသုတျပါ။ခကျြအပွငျတဝိုကျကို Body lotion လိမျးပေးပါ။ကဲ… ခကျြက အနံ့ဆိုးတှေ သကျသာစဖေို့ ဒီအခကျြလေးတှအေတိုငျး သခြောလေး သနျ့စငျပေးမယျဆိုရငျ ဗိုကျအောငျ့ဗိုကျနာ ကငျးပွီး အနံ့အသကျကငျးတဲ့ ခကျြကလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ။
ဤဆောငျးပါးကို Mizzima ၏ မိတျဘကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဆေးပညာဝကျဘျဆိုဒျ hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြတယ်နော်။ ဒီလို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး လုပ်ရတာက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနံ့အသက် ကင်းစင်ဖို့ပါ။ တကိုယ်ရေ သန့်ရျင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး သန့်စင်မှုတွေ လုပ်ကြပေမယ့် ဗိုက်အလယ်တည့်တည့်မှာ ရှိနေတဲ့ ချက်ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်မလားဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားကြပါတယ်။ အကြောင်းက ချက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်တဲ့အခါ ဗိုက်အောင့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။ ဒီတော့ ချက်ကို သန့်စင်သင့်ရဲ့လားဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ချက်က ဘာကြောင့် နံရတာလဲ…………..
ချက်က လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ချက်ထဲမှာ ပုံမှန်ကတော့ ချွေးတွေ၊ ဆဲလ်သေတွေ နဲ့ အမှုန်တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနံ့ဆိုးထွက်နေတာပါ။
ချက်က အနံ့ထွက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက သန့်ရှင်းမှု အားနည်းလို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအနှံ့ကို နေ့စဉ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်သလို ချက်ကိုလည်း ပုံမှန် သန့်စင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အရေပြားပေါ်မှာ ဘက်တီးရီးယားတွေက ထရီလျံနဲ့ချီပြီး ရှင်သန်နေနိုင်သလို သူတို့ကအချိန်တိုင်းမှာ အလိုလိုပေါက်ဖွား ဖြစ်ပေါ်နေကြတာပါ။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကို ပုံမှန်ဂရုစိုက်နေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်မရှိပေမယ့် ချက်လိုမျိုး လေဝင်လေထွက် မကောင်းဘဲ အရေပြား အတွန့်အခေါက်များတဲ့ နေရာမျိုးမှာကျ ဘက်တီးရီးယားတွေက ပေါက်ဖွားရှင်သန်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက် နည်းတဲ့အခါ အနံ့ဆိုး ဖြစ်ပေါ်တာမျိုး မရှိပေမယ့် ဘက်တီးရီးယားတွ အရမ်းများလာတဲ့အခါ ချက်က အနံ့ဆိုးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ချက်ကို သန့်စင်ဖို့ လိုလား………….
ချက်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အနံ့ဆိုးထွက်တာဆိုတော့ ချက်ကိုလည်း အခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ နည်းတူ သန့်စင်ဖို့ လိုပါမယ်။ လေ့လာမှုတွေအရတော့ ချက်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယား အမျိုးပေါင်း ၆၇ မျိုးလောက် ရှင်သန်နေနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်။
ချက်ကို ပုံမှန် မသန့်စင်ဘူးဆိုရင် ချက်ထဲမှာ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးက ချက်ကို တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် သန့်စင်တာပါ။
ချက်ကို ဘယ်လို သန့်စင်မလဲ……………
ချက်ကို သန့်စင်တဲ့အခါ အဆင့် (၂) ဆင့်ခွဲထားပါတယ်။ ဒါကတော့ ချက်အတွင်းပိုင်းကို သန့်စင်တာနဲ့ ချက်အပြင်ဘက်ကို သန့်စင်တာပါ။
ချက်အတွင်းပိုင်းကို ဒီလို သန့်စင်ပါ
ချက်အတွင်းပိုင်းကို သန့်စင်တော့မယ်ဆိုရင် ရေမချိုးခင်မှာ
ဂွမ်းစ သန့်သန့်လေးကို အရက်ပြန် ဆွတ်ပြီး ချက်အတွင်းပိုင်းကို ခပ်ဖွဖွလေး သန့်စင်ပါ။ ဂွမ်းစမှာ ပေတာမျိုး၊ အရောင်ပြောင်းသွားတာမျိုး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အသစ်တစ်ခု ပြောင်းပါ။ဂွမ်းစက သန့်သွားပြီးဆိုရင် နောက်ထပ် ဂွမ်းစအသစ်ကို ယူလို့ ရေစွတ်ပါ။ ချက်ကို သန့်စင်ပြီး ဂွမ်းစအခြောက်လေးနဲ့ သန့်ပေးပါ။ပြီးရင် ရေချိုးချလိုက်ပါ။ ရေချိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ တဘက်စ အစွန်းလေးနဲ့ ချက်ကို သန့်စင်ပေးပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ကို body lotion လိမ်းတဲ့အခါ ချက်ထဲ မဝင်စေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ချက်အတွင်းသားက စိုစွတ်မှု ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားနိုင်ပြီး အနံ့ဆိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ချက်အပြင်ဘက်ကို ဒီလို သန့်စင်ပါ
ချက်အပြင်ဘက်ကို သန့်စင်တာက ချက်အတွင်းပိုင်းကို သန့်စင်တာထက် ပိုမို လွယ်ကူပါတယ်။ ရေမချိုးခင်မှာ
ရေစိုအဝတ်သန့်သန့်တစ်ခုနဲ့ ချက်တဝိုက်ကို ပွတ်ပါ။ ပြီးရင် ဆပ်ပြာပွတ်ပါ။ပြီးရင် ရေလောင်းချလိုက်ပါ။ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ သေချာ ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ချက်အပြင်တဝိုက်ကို Body lotion လိမ်းပေးပါ။ကဲ… ချက်က အနံ့ဆိုးတွေ သက်သာစေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်း သေချာလေး သန့်စင်ပေးမယ်ဆိုရင် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ ကင်းပြီး အနံ့အသက်ကင်းတဲ့ ချက်ကလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။